Axmed Madoobe iyo Deni oo loo diray baaq ku saabsan Shirka | KEYDMEDIA ONLINE
Axmed Madoobe iyo Deni oo loo diray baaq ku saabsan Shirka
Si doorashadda dhaqso loo qabto, waxay Xukuumadda Xil-gaarsiinta ugu baaqday dhinacyada ka maqan kulanka Afisyooni inay kusoo biiraan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Axmed Madoobe iyo Deni oo laf-dhuun-gashy ku noqday Farmaajo ayaa loogu baaqay inay kusoo biiraan Wadahadallada, si xal looga gaaro khilaafka doorashadda dalka Soomaaliya.
Afhayeenka Xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Ibraahim Mucalimo ayaa sheegay in khilaafka taagan lagu xalin karo oo kaliya miiska wadahadalka iyo in tanaasul ay sameeyaan dhinacyada diidan hanaanka doorashadda, oo ula jeedo Axmed Madoobe iyo Deni.
"Dowladda waxay markale ugu baaqeysaa dhinacyada maqan ee Maamullada Jubbaland iyo Puntland inay kusoo biiraan wadahadallada socda, si loo xaliyo kala aragti duwanaanta, islamarkaana doorashada si dhaqsi ah lagu qabto," ayuu yiri Mucalimo.
Baaqa Afhayeenka Rooble ayaa imaanaya iyadoo shalay uu fashilmay shir la filayay in Farmaajo iyo madaxda shanta Maamul inuu u furmo, kaasoo daqiiqadii ugu dambeysay baaqday, iyadoo dedaalladii ay sameeyeen Beesha Caalamka lagu guul-dareystay.
Axmed Madoobe iyo Deni ayaa wali ku dhegan mowqifkii ay la yimaadeen Muqdisho horaantii bishan, waxaana Farmaajo uu ku faraxsan yahay khilaafka, maadama ay fursad u tahay mudo-korarsiga uu doonayo inuu ka meel-mariyo Gollaha Shacabka.